Ukwenziwa kokunamathisela kwe-aluminium okungenamaqabunga
Ngosizo lochwepheshe bethu, sifakiwe ekuthumeleni nasekunikezeni uhlobo oluhle kakhulu lwe-Leafing Aluminium Paste. I-Leafing Aluminium Paste enikeziwe inekhwalithi engenakuqhathaniswa futhi iyatholakala emkhakheni webhizinisi ngamanani anengqondo. Le Leafing Aluminium Paste yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi ezizanyelwe ikhwalithi yazo engenakuqhathaniswa ngaphansi kokuqondisa kongoti bethu abaqeqeshiwe.
Impilo ende yokuphatha
I-Aluminium Namathisela I-Aluminium Namathisela 1100
Ukuze sihlangabezane nezimfuno ezahlukahlukene zamakhasimende ethu ahlonishwayo, singumhlinzeki ovelele wokunikela ngemikhiqizo ehlukahlukene kumakhasimende ethu. Umkhiqizo wethu esiwunikezayo wenzelwe ngokunembile futhi kusetshenziswa okungcono kakhulu kwebanga lezinto eziyisisekelo nobuchwepheshe besimanje. Umkhiqizo onikeziwe uthakazelelwa kakhulu ngamakhasimende ethu ngenxa yamandla awo amakhulu nokuqina kwawo. Ngaphezu kwalokho, ukugwema noma yimaphi amaphutha, umkhiqizo ohlinzekwayo uhlolwa ngabalawuli bekhwalithi yethu kumapharamitha ahlukahlukene ekhwalithi.
ukwakhiwa kwe-aluminium yokunamathisela amaqabunga
okunamathiselwe kwe-aluminium okungenamaqabunga
Izici Ukunamathiselwa kwe-aluminium okungenamaqabunga kukhanya ngosayizi omuhle wengxenyenamba namandla okucasha, okunomphumela omuhle wokuhlobisa. Isetshenziselwa kabanzi upende wasolwandle, upende wesando, ukuqala kwemikhiqizo ye-electromechanical nopende wezimboni ojwayelekile. Kanye nokusetshenziswa kwesambulela sesikhumba sokumboza. Okunamathiselwe kwe-aluminium okungenamaqabunga kuqukethe umumo we-aluminium olinganiselwe nomumo we-solvent ngokwelashwa okukhethekile, okusetshenziswa emigqeni yesando lacquer enempahla enhle yokulwa nokugqwala. Ingasetshenziswa futhi ku ...
Ipeyinti lesiliva le-aluminium lesiliva elingantanta
I-Aluminium isiliva yokunamathisela: I-Aluminium isiliva yokunamathisela uhlobo lwe-pigment. Kucutshungulwe ngokukhethekile futhi kuphathwe indawo, ukuze ubuso beshidi le-aluminium bushelelezi futhi bushelelezi, imiphetho ihlanzekile, ukuma kuvamile, ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana kugxilwe, futhi ukufaniswa nohlelo lokumboza kuhle kakhulu. Ijika elijwayelekile losayizi wezinhlayiyana lilawulwa ngokuqinile futhi linokusebenza okuhle kokumbozwa ngaphansi kwamafomula afanele. Igama lesiNgisi: Aluminium silver paste, Alias: Aluminiu ...
Okunamathiselwe okungahambisani ne-aluminium anticorrosive silver
I-Aluminium isiliva yokunamathisela ibizwa nangokuthi i-aluminium powder unama, ngoba isigaba sayo esimhlophe sesiliva sivame ukubizwa ngokuthi isiliva, kepha ayiqukethe izinto zesiliva zensimbi. Izingxenye zalo eziyinhloko ama-aluminium flakes, ama-solvents kanye nabasizi, ngendlela yokunamathisela. Kubonakala ngokumboza nokusebenza kwe-anti-corrosion kwefilimu kapende eyakhiwe yishidi le-aluminium, ubukhazikhazi bensimbi, ikhono lokukhanyisa ukukhanya okuhle kakhulu, kanye nomphumela oyingqayizivele "we-heterochromatic ne-angleR ...
i-aluminium unamathisele i-pigment enamathela isiliva unamathisele
Izici Umshini metallized aluminium sombala Umshini metallized aluminium sombala ngesimo ukumiswa okuqinile kuphela. Inganikeza ukumboza i-chrome-plating effect. Kuhlotshaniswa namaqabunga e-aluminium wendabuko noma okungewona amaqabunga, kuhluke kakhulu ezindaweni ezilandelayo: I-1 inesakhiwo esakhiwa ama-flakes e-aluminium amancane kakhulu.Umthamo omncane wale pigment ungafinyelela umthelela wensimbi ongcono kunokunamathisela kwendabuko kwe-alumimium. Ama-flakes e-aluminium anobuso obushelelezi kakhulu, okuholela ...
I-Aluminium resin unamathisela i-pigment ye-solvent based metallic oil Paint
Ukupakisha Iphakheji: Imigqomo yensimbi engama-25kgs yobuqotho obuhle nge-inline epulasitiki lapho kufanele khona. Isitoreji Gcina izivalo zivalwe ngci. Gcina endaweni epholile neyomile esivalweni esivaliwe. Gcina kude nokushisa nokukhanya kwelanga okuqondile. Vimbela ukwakheka kothuli. Qinisekisa ukungena komoya okuhle. Ngemuva kokugcinwa kwesikhathi eside, unamathisela uyoma kakhulu kunakuqala.Sicela uphinde uhlole imikhiqizo ngaphambi kokusetshenziswa ukugwema noma yikuphi ukulahleka. Ezokuhamba Bamba ngobumnene, futhi akukho ukushayisana okukhulu. Ezokuthutha zihambisana ngokuqinile nemithetho yendawo ...